Ngokomthetho Russian, igama elisha - "ukuqapha kwezimali" (2015 ngonyaka kwaphawulwa ukungena force of nomthetho ofanele). Usikisela ukuhlela indlela ngokuyinhloko entsha nokuxhumana phakathi amabhizinisi kanye Federal Intela Yesevisi. Yini ekhethekile ngale emisha okukhulunywa? Yiziphi izinzuzo amaqhinga abafanele for amabhizinisi kanye Intela Yesevisi Federal?
Ingqikithi yalo eside
Uyini ukuqapha intela? Le nkulumo ibhekisela kumuntu RF empeleni esasisesisha yethulwa ngo 2015, imodi abezentela. Ngezinye izikhathi ibizwa ngokuthi "ukuqapha ovundlile intela."
izimiso Key: obala lokukhokha komunye oyedwa intela-aspect yokubika Federal Tax Service, kanye nezinqubo ku ukulawula kwangaphakathi ukwethembeka FTS ukuba amasheke - ophumayo noma off-site. ukuqapha Tax kudinga ukuba babe buyindlela innovative ukuletha ubudlelwane ibhizinisi kanye nohulumeni ezingeni elisha.
Esinye sezici ezibalulekile ezenziwe yileli indlela okukhulunywa ngayo, - kungenzeka inhlangano nokuxhumana bentela kanye neziphathimandla zokulawula elektroniki. Lokhu kusho, okokuqala kunakho konke, ayanda ijubane izinqumo.
Phakathi uhlele kabusha imicondvo lemcoka umqondo zokuqapha intela - ikhono Federal Tax Service ukufinyelela ulwazi olufanele sibonakalisa isiyalo Inkampani e isici ukubika okubaliwe edingekayo izimali isimo. Ngakwelinye ihlangothi, abakhokhi bentela zingasebenzisa zonke iziteshi etholakalayo ukuthola ulwazi oludingekayo emnyangweni.
Cabanga izingxenye ukuthi kubhekwe njengento Izingxenye ezisemqoka imodi ohambelana ukuxhumana phakathi FTS futhi ibhizinisi. Okokuqala, kuyafaneleka ithuluzi ezifana umbono kufanelekile. Ngalo, amaqembu angase alungise izingxabano kungenzeka ezihlobene ubudlelwane zomthetho emkhakheni kwentela kanye accounting. Kumiswa umbono wabonisana is ehhovisi lentela, futhi uma izimali yomkhokhi athobele imiyalelo, kungase asuswe inhlawulo kungenzeka futhi izinhlawulo.
Esinye isici esiphawulekayo esifaka zokuqapha intela, - wesifunda asungula nezivumelwano Imininingwane ukuxhumana phakathi kumnikazi FTS. Le ndlela yokwenza kuhilela umsebenzi umthethonqubo ekhethekile. Lokho Federal Tax Service kanye bentela kulindeleke ukuba bahlanganyele omunye ngezindlela ezimbili: esebenzisa amadokhumenti e-Office (in format electronic) noma ngokulandelana FTS ukufinyelela ngqo amafayela ibhizinisi. Ngaphezu kwalokho, amabhizinisi uzokwazi afake izici isiqondiso ngohlelo olulawulayo algorithm.
Ukubukeka ukuqapha e-Russian Federation
Mshini embuzweni, eRussia muva livikeleke umthetho kahulumeni. Umthetho ku zokuqapha intela ngo-November 2014 futhi lisayindwe nguMengameli we Russian Federation. Ngokuhambisana uMthetho Federal Ayikho 348, ngawo satjhugululwa Code Tax, inkampani kwadingeka ithuba ukusebenza ne-Federal Tax Service ngendlela entsha. ukuqapha komthetho intela Waqala ukusebenza ngo-January 1, 2015. Kodwa omunye umphako walo uzoba umlingisi normative ngo-2016.
Njengoba emphakathini ibhizinisi Russian ifikile ukuqaphela ukuthi kubalulekile ukwethula zokuqapha intela? Lo mthethosivivinywa, kamuva elaba nemithetho kahulumeni, ngokusho kwabanye, waqalwa nguhulumeni ngokusekelwa ibhizinisi elikhulu nezinhlobo Consulting 2012. Ngqo ekusungulweni yomthetho efanele yokutholwa imizamo Agency amasu - okuyi nethimba obangela sesimanje nezinqubo abezentela eRussia.
Ukuphumelela esisebenzayo walesi sikhungo ukuqapha
Ezinye izinkampani ejensi ucwaningo ziye lwenteke Isivivinyo scheme nokuxhumana FNS namabhizinisi ukuthi ziye zabonisa kahle eliphezulu kohlaka kwezimali zokuqondisa. Yeka ukuthi kungaba nemiphumela lifinyelelwe ngokuhamba lezi zenzakalo?
Ngakho, ibhizinisi eningi umxhwele ukuthi inqubo ukuxhumana ngogesi ne FTS banayo ithuba ngokushesha ukuthola iseluleko mayelana nodaba oluthile. Futhi, abanye abacwaningi abathi ngokwezinga waveza ukuthi phakathi kwezokuxhumana embuzweni, wayekwenza an informal, khulula kusukela ezikhulwini zikahulumeni kuya zokuxhumana amagama ukuthi kwakuyinto engacabangeki ngaphansi kohlelo ubudala. Nokho, ngaphandle izikhulu ezingadingekile, kwacaca ukuthi, abaningi izindaba okukhulunywa ngazo ngempumelelo. Ngaphambi kokufika ukuqapha sikhungo intela izinkampani eziningi Russian akazange ithuba elinjalo.
Njengoba kuboniswa Isivivinyo izindlela zokuxhumana ibhizinisi futhi Federal Intela, izizathu yimuphi umehluko omkhulu phakathi kwezinhlangano ngokuhamba nokubambisana yezomthetho ebekwe ngaphansi kwalesi scheme babonakala njalo. Nokho, ncono lizinga ukuqonda Tax Service kanye osomabhizinisi. Eselincishelwe umsebenzi zezingcwenti kusuka zombili: umane azange abe nesidingo umsebenzi owengeziwe, nobuntu nezinqubo ubudala isikimu.
Ngokusho kochwepheshe, ibhizinisi Russian iye kabi kudingeka indlela efana zokuqapha intela. Lo mthethosivivinywa, kamuva elaba insimbi agcwele zomthetho kuleli cala qualitatively saveza wonke amalungiselelo adingekayo afakwe yona ukuqaliswa mshini omusha. Lokhu kwashukumisela ochwepheshe adunyiswe zako, hhayi kuphela ngokuya ukuhlobana iziqondiso, kodwa futhi isici amathemba ukuqaliswa kwabo okuwusizo.
Indlela yokwenza umsebenzi isikimu entsha
Kodwa kanjani ukuqala ubuhlobo nenkampani njengengxenye yentela yombuso Izikhungo zokuqapha intela? Kunezindlela eziningana ngemibandela ngenkathi owawuthi ibhizinisi bangathembela ilungelo embuzweni. Phakathi ukhiye:
- ibhizinisi Ukudluliselwa esimweni njengoba izintela, imisebenzi mkhuba kanye nezinye izindleko 300 mn deda.. futhi kulo nyaka;
- Imali engenayo ibhizinisi ngokuhambisana yokubika zezimali ruble no 3 billion .. futhi kulo nyaka;
- intengo ingqikithi amafa yenkampani - ruble no 3 billion .. nokuningi ku 31 kuZibandlela ngonyaka.
Ake sicabangele ke lokho kungaletha izinzuzo aphathekako isimo kanye yangasese intela emakethe zokuqapha sikhungo.
Ngenxa indlela olucutshungulwayo ezisekelwe kunembeza payers izintela endaweni yomcebo, ngubani Sakwazi ukwakha uhlelo oluyimpumelelo lwangaphakathi lokulawula ukusebenza kwezimali, uzokwazi uxhumane ne-Federal Tax Service ngendlela lapho ibuphi ubunzima uzobe lincane.
Phakathi izinzuzo ezingukhiye zokuqapha intela - okungukuthi, njengoba sibonile ngenhla, ukukhulula ibhizinisi kusukela ukuhlolwa yentela yombuso Izikhungo. Leli qiniso ivumela izinkampani, isibonelo, ukuze ulondoloze ku ufinyelela amasevisi abameli kanye ayesekela kabani usizo ngezinye izikhathi kudingeka lapho kunakwa ibhizinisi Federal Tax Service.
Ngalesi indlela, njengoba umbono ezicatshangisisiwe, umehluko oyinhloko nezingozi intela ethile ukuze imisebenzi amabhizinisi zizoxazululwa esikhathini samukelekile kakhulu. Ngaphambi intela ku Russian Federation kanye nenqubo ukuqapha lomhlangano laqanjwa sivunyiwe kahle, nobunzima ezinkampanini nezokuxhumana kanye Federal Intela Yesevisi angase ukuxazululwa iminyaka.
ukuxhumana ngempumelelo Legal Affairs
Wondla umthetho we Russian Federation yentela yombuso kanye ne indlela ukuxhumana phakathi amabhizinisi libhekene inzuzo ebaluleke - inkampani kungaba, uma kudingeka, cela Office amazwana ezithile ngokuphathelene sphere abafanele of ubudlelwano zomthetho. Futhi, abasebenzi yentela yombuso Izikhungo, izifundo ukuqapha intela, uzoshesha ufunde imibhalo yokubika efanele futhi ukuhlola elingakanani basondela ngokulungile.
Ngenxa ngokubambisana neNhlangano yentela yombuso Izikhungo kohlelo olusha osomabhizinisi kwadingeka ithuba abafuna ukucaciswa mayelana sokudlulisa imali evela kokwenziwe ngaphambi kosuku umsebenzi abawunikiwe. Lesi yisinyathelo esibalulekile phambili esikhathini ukuxhumana kwezamabhizinisi nakuhulumeni-aspect wokubambisana ezakhayo.
Ukuhlanganyela wamabhizinisi ekuqapheleni intela ugwema ezindlekweni ezengeziwe izimali ezinkulu futhi ngezinye izikhathi ebuhlungu isabelomali inkampani endaweni yomcebo, ngezinye izikhathi kudingeka bakhokhe phezu ophumayo amasheke. Ngo inqubo ukuxhumana phakathi kwabamabhizinisi Federal Intela ngaphansi kohlelo olusha ematfuba izimo ezinjalo incane.
exchange Electronic kolwazi
Phakathi izinzuzo ezisobala isivumelwano phakathi yentela yombuso Izikhungo nosomabhizinisi ukuthi eziqoqwayo kuzoqashwa kohlaka isikimu embuzweni, - ikhono exchange ngogesi ngokugcwele kwemibhalo.
Le fomethi zokuxhumana abantu abaningi ibhizinisi lifiseleka ukwedlula idokhumenti iphepha, njengoba kulokhu kucatshangwa izindleko ingasaphathwa ngesikhathi kanye nokuphathwa kwabasebenzi ukuze sifeze inqubo yokubika edingekayo. Ngemva zokuqapha intela sikhungo sivunyiwe, ifemu wathola ithuba esisemthethweni ukuhumusha ngokugcwele ukuxhumana ne-Federal Tax Service in format electronic. Ukuze iminyango eminingi liphinde elula: asikho isidingo ukuchitha abasebenzi kunini kokufunda izenzakalo.
Inqubo wokuzithandela ephetha isivumelwano ne-Federal Tax Service - isici esibalulekile indlela ezifana uhlobo ezifanele ukuqapha. Tax kokuvusayo amabhizinisi ezinkulu akuzona eziningi, futhi zihlale izinyathelo wamukelekile maqondana isimo. Nokho, izinkampani eziningi kungase kuthathe isikhathi ukuba kungeniswe uhlelo yayo zokubika zezimali nokulawula kuhambisana nezidingo. Kodwa kuzo zonke izinto ukuthi inkampani ukutshala kudingekile ngcono ingqalasizinda, asule nge awokuthi.
Ukunqanyulwa yokuqapha unscheduled ukuhlolwa
ukuqapha Tax - lokhu empeleni uyilungelo. Kwezinye izimo, nikela kungashiwo ngokomthetho inqanyulwe. Lena yamukeleke uma, isibonelo, inhlangano inikeza FTS ulwazi olungamanga noma engawunaki isibopho ukuthumela imibhalo ethile.
Umthetho Wanakekela zimo lapho on-site ukuhlolwa kungaba kwenziwe ngisho noma inkampani futhi Federal Intela Yesevisi wenza isivumelwano okuhambisanayo ngaphansi kohlelo olusha. Lokhu kungenzeka uma:
- isheke egcina isakhiwo ephakeme Federal Tax Service, olawula ukusebenza kwe nesibopho kweminyango;
- inkampani engahlangabezani nalezi zidingo eziqukethwe umbono wabonisana;
- inkampani Kumele unikeze isimemezelo elibuyekeziwe esingashintshi kuze kufinyelelwe esikhathini elihambisana isikhathi izinqubo zokuqapha, isibonelo, ngenxa yokuthi inani nezimali ekufanele zikhokhwe kuyehla njengoba iqhathaniswa nobungako elivela idokhumenti ngaphambilini.
Futhi ku-ukuhlolwa kwendawo kungaba kwenziwe uma uhlobo ezifanele ubudlelwano obusemthethweni phakathi ibhizinisi futhi FTS abangu isivumelwano ngendlela zazo sishilo ngenhla.
imisebenzi Esiphuthumayo ukuqaliswa kohlelo olusha
Ukwethulwa kohlelo ethuthukisiwe ukuxhumana phakathi amabhizinisi kanye yangaphakathi Revenue Service idinga ekwakhekeni ngokuyinhloko entsha amayunithi ezihlelekile e Federal Tax Service, kanye amafemu. UMnyango, isibonelo, kuzodala uqhekeko omusha uyophumelela ochwepheshe abanolwazi nokuxhumana bentela inthanethi. Inkinga efanayo kuyodingeka kubhekwane futhi amabhizinisi amaningi. Abakhokhi bentela, njengoba sibonile ngenhla, ezimweni eziningi, uzodinga ukutshala izimali zami kule sesimanje ingqalasizinda ye inqubo yokubika yenkampani yangaphakathi ukuze awayise Ngokuvumelana nenqubo yezomthetho.
WamaFascist - ubani lo? Meaning futhi amafilosofi lwamaNazi
Kusukela lokho ukuba bagqoke izikhindi elimhlophe? Kusukela sizogqokani ehlobo ezimhlophe lace izikhindi? isithombe